August 2019 – Indheergarad
423 View Indheergarad – Ogoosto 24, 2019 – Sooroga – Vol: 01 – Cadadka: 19aad Hordhac Buuggaan THE GEOPOLITICS READER, waxa uu ka kooban yahay qoraallo, aragtiyo iyo mabaa’dii siyaasadeed ee ay lahaayeen madaxdii iyo aqoonyahannadii […]
August 23, 2019 Cabdifataax Xasan-Barawaani 0
388 View Indheergarad – Ogoosto 23, 2019 – Hakisbila – Vol: 01 – Cadadka: 18aad Q I: Goor fiid ah, cadceedduna kolkaas uun godka ku xarootey. Falaadhaha cirka guduudka ka dhigeyna ay weli sii muuqdaan. Laydh […]
437 View Indheergarad – Ogoosto 23, 2019 – Hakisbila – Vol: 01 – Cadadka: 17aad Qarnigii koowaad [CE] GDP- ahaan, adduunka Aasiya waxa ay ka ahayd 76.3%, halka galbeedka Yurub ay ka ahaayeen ama ka soo […]
354 View Indheergarad – Ogoosto 22, 2019 – Hakis – Vol: 01 – Cadadka: 16aad Hordhac Aadanaha adduunka ku nool mid walbaa waxay leedahay nidaamyo is-maamul hoosaad iyo xeerar kala jideeya una degsanaa muddooyin aad dheer […]
441 View Indheergarad – Ogoosto 22, 2019 – Hakis – Vol: 01 – Cadadka: 15aad Buuggan gacantayda ku jira waxaa qoray Kishore Mahbubani, waxaana uu ugu magac-daray: “Has the West Lost It?“. Muddo hadda laga joogo sannad. Qoraa […]
August 21, 2019 Cabdifataax Xasan-Barawaani 0
284 View Indheergarad – Ogoosto 21, 2019 – Koodaar – Vol: 01 – Cadadka: 14aad Hordhac Noolaha Aadamuhu intii uu adduunka guudkiisa saarnaa, waxa uu ku hawlanaa oo ku jirey isbeddel xag kasta ku wajahan. Ha […]
336 View Indheergarad – Ogoosto 21, 2019 – Koodaar – Vol: 01 – Cadadka: 13aad Qof walba waxa uu garanayaa in erayga “khasab” uu yahay ka soo horjeedka erayga “baryo”. Waxaa kale oo dadka badankiis og […]
394 View Indheergarad – Ogoosto 21, 2019 – Koodaar – Vol: 01 – Cadadka: 12aad Hordhaca 1993-dii maqaal uu qoray oo uu ugu magac daray: Clash of Civilizations“, Samuel Huntington ayaa waxaa ku jiray ciwaan hoosaad, uu […]
355 View Indheergarad – Ogoosto 20, 2019 – Lamtako – Vol: 01 – Cadadka: 11aad Waxaa jira heerar dhawr ah oo kala duduwan isla markaana kala dandanbeeya oo qofka aadanaha ahi maro. Heerarkaas dhawrka ah qof […]
345 View Indheergarad – Ogoosto 20, 2019 – Lamtako – Vol: 01 – Cadadka: 10aad Billowgii adduunka bulshada hadba ku soo dul nooleyd, waxa ay sameynayeen kacdoonno isbeddel oo taabanaya noloshoodo. Taas oo qarniyo kala duwan […]